Quiche nesalmon, broccoli uye mbudzi chizi | Bezzia
Salmon, broccoli uye mbudzi chizi quiche
Maria vazquez | | Salads uye miriwo, Pescado
KuBezzia tinoda chaizvo maQuichés. Vari savory tarts Isu tinovawana iri imwe nzira yakanaka sekutanga kana tiine vaenzi, asi zvakare yakanaka kwazvo dhishi yekugovana chero zuva revhiki. Uye yatakaedza izvi saumoni, broccoli uye mbudzi chizi quiche ndirwo rwatinofarira.
Iyo quiches gamuchira mafirita mazhinji, saka ivo vakakwana kutora mukana weaya masara atinawo mufiriji. Muchiitiko ichi, saumoni nyowani, broccoli uye chizi yembudzi ndizvo zvigadzirwa zvadzo zvikuru. Uye zvakare, isu takagadzirirawo mukanyiwa pamba.
Mukanyiwa wequiche Zviri nyore kwazvo kugadzirira asi kana iwe usina nguva yekuigadzira kana iwe uchingofarira imwe irinyore kana inokurumidza imwe nzira, unogona kubheja pashopu yekutengesa kana puff pastry hlama. Hatigone kuti mhedzisiro yacho yakafanana asi zvakaenzana.
150 g yeupfu hwegorosi
75g inotonhora bata
1 supuni yemafuta omuorivhi
1 leek yakasarudzwa
1/2 hanyanisi hanyanisi, minced
180 g. broccoli mu florets
80 g. grated chizi
280 g. akachekwa salmon nyowani
5 zvimedu zvembudzi chizi
190 ml. kirimu yekubika
190 ml. mukaka wese
Sakanidza upfu nehotela mundiro kuita machubhu uye shanda, kungave nekumhanyisa kana nemaoko ako, uchinama iyo bundu, kusvikira wawana kugadzikana kwejecha.
Pashure wedzera zai, mwaka uye wedzera maaspuni maviri emvura. Sanganisa sezviri madikanwa kubatanidza izvo zvinoshandiswa uye kugadzira bhora.
Paunenge wabudirira, isa mukanyiwa mufiriji uye rega igare kweawa.
Kunyange, birisa bŕocoli maminetsi mana mumvura ine munyu yakawanda. Mushure menguva, dhonza zvakanaka uye chengetedza.
Ipapo sunga mupani ne 1 punipuni yemafuta emuorivhi leek uye hanyanisi kwemaminitsi mashanu.
Pashure wedzera broccoli negariki uye sautee kwemaminetsi mashoma. Paunenge wapedza, bvisa pani kubva pamoto uye chengetedza.
Preheat oven kusvika 180ºC.
Bvisa hupfu uye inoteedzana nayo yakatenderera quiche mold ye26 cm muhupamhi kana yakarebeswa imwe ye36 × 13 ine bvisika bhesheni.
Ipapo baya chigadziko neforogo, isa pepa rechinyorwa pamusoro uye zadza nemabhora ekubikisa kana miriwo.
Bika hwaro mukati memaminitsi makumi maviri.
Tora mukana wenguva iyoyo ku rova mazai nekirimu, mukaka uye pini yemunyu, mhiripiri uye nutmeg.
Mushure memaminitsi gumi tora muforoma muchoto uye bvisa zvese mabhora kana miriwo uye bepa.
Isa grated chizi pachigadziko uye mugoisa pamusoro payo musanganiswa webrokholi wamakachengetera, salmoni nyowani yakatemwa uye chizi yembudzi.
Kupedza dururira mumusanganiswa wakarohwa.
Bika maminitsi makumi mashanu kana kusvika makona ari endarama. Uye kana zvangoitwa, bvisa chakuvhe zvakanaka.
Shandira saumoni, broccoli uye mbudzi chizi inodziya kana kudziya.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Recipes » Pescado » Salmon, broccoli uye mbudzi chizi quiche
Tsvaga iyo midziyo yekubheka kubva kuZara Kumba
Godo negodo mukati mevaviri ava